3: D Camo Ghillie ဝတ်စုံ - တရုတ် 3D Camo Ghillie ဝတ်စုံပေးသွင်း,စက်ရုံ -Fujie ပြင်ပတွင်
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » Hunt » GHILLIE suite
3: D Camo Ghillie ဝတ်စုံ
စတိုင်အဘယ်သူမျှမ. : FJ-HG-005
1. 3: D camo ဝတ်စုံကိုငါးခု seperate အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်: ကိုယ်တော်ကိုဟစ်ကြော်, အနွေးထည်, ဦးထုပ်, သေနတ်ထုပ်ပိုးပြီး, သိုလှောင်မှုအိတ်.
2.3ဃ camo ghillie ဝတ်စုံကိုဦးထုပ်လွယ်ကူသော Adjustments များအတွက်မေးစေ့သိုင်းကြိုးရှိပါတယ်
3.3ဃ camo ghillie ဝတ်စုံကိုဂျာကင်အင်္ကျီ: elastic ခါးနှင့် cuffs; လွယ်ကူတဲ့ဒင်္မျက်နှာစာ.
4. 3ဃ camo ghillie ဝတ်စုံကိုကိုယ်တော်ကိုဟစ်ကြော်: drawstring ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူ elastic waistband.
5. လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက်ထည့်သွင်း Drawstring အတူသယ်မည့်အိတ်အိတ်.
6. ရွေ့လျားလာသောအခါထည်ဆူညံဖြစ်မရှိမဖြစ် .
တစ်ဦးကပြောက်ကျားဝတ်စုံ, ထို့အပြင် ghillie ဝတ်စုံအဖြစ်လူသိများ, မိုးသည်းထန်စွာသစ်ရွက်တူဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. သေနတ်လက်တဲ့သမား, မုဆိုးနှင့်သဘာဝဓာတ်ပုံဆရာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သို့ရောနှောနေခြင်းနှင့်ရန်သူများကိုသို့မဟုတ်ပစ်မှတ်အနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပြောက်ကျားဝတ်စုံဝတ်ဆင်စေခြင်းငှါ. အဆိုပါဝတ်စုံအတွက် wearer \_ 's အောသုံး dimensioned အဖွဲ့ဟာပေး, အစားတစ်ဦး linear ထက်.
အဆိုပါပြောက်ကျားဝတ်စုံတစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီပါဝင်ပါသည်, ဘောင်းဘီတစ်ထည်နှင့် package ကိုအိတ်.
ဤသည်ပြောက်ကျားဝတ်စုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါသည် 2014 ကျေနပ်ပြောက်ကျားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ထားတဲ့နယူးဒီဇိုင်း.
အရည်အသွေးမြင့်မား polyester ထား, က \_ 's အလွန်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသော. သင်ကဝတ်ထားအလွန်မြန်ဆန်စွာရွှေ့နှင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွင်းကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်ဆေးကြောပါနိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှစ်ခု camo အရောင်ရှိပါတယ်. ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
ဟန်ကျိုး Fuji အဆောက်အဦးအပြင်ထုတ်ကုန်များ Inc မှ. ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြု, ပြင်ပထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်. နှင့် 20 စက်မှုဇုန်အတွေ့အကြုံအနှစ်,ကျနော်တို့အလျင်အမြန်နဲ့တိကျစွာသင့်ရဲ့တဦးတည်း-ရပ်တန့်ပြင်ပ solutiions ပံ့ပိုးပေးဖြစ်ခြင်းထံအပ်နှံကြသည်ဖောက်သည် needs.We နားလညျနိုငျ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်ငါးမျှားနေကြတယ်&ပြောက်ကျားဝတ်စုံအပါအဝင်အမဲထုတ်ကုန်,ပြောက်ကျားအမဲလိုက်အိတ်,ပြောက်ကျားအမဲလိုက်ထုပ်,ပြောက်ကျားမုဆိုးပိုက်ကွန်,PU&ခံစားခဲ့ရစော်ကားခြင်းကိုစီးရီး,စစ်ရေးအဝတ်အစားစီးရီး,Neoprene ဘွတ်ဖိနပ်&waders series,ရော်ဘာဖိနပ်&waders swaders စီးရီး��်းဘွတ်ဖိနပ်&waders series,wading ဖိနပ်စီးရီး.
တွေကို product review
နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်း sign up ပြုလုပ်ပါ,
ပေါင်း: suite 1302, အဆောက်အဦး No.6,, Zhongda ရင်းနှီးသောစီးတီး,No.822 Dongxin လမ်း ,Xiacheng ခရိုင်, ဟန်ကျိုး 310004 Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ
မူပိုင် 2018-2026 © Fuji All Rights Reserved
Sitemap | ဘလော့ | XML ကို